Sidee loo beddelaa luuqadda Mac? Talaabo talaabo talaabo ah | Waxaan ka socdaa mac
Sida loo beddelo luqadda Mac-gaaga
Javier Porcar | | Tababarada
Casharradan waxaan ku arki doonnaa dhammaan xulashooyinka aan ku haysanno Mac-keena si aan u dejino luqadda ugu fiican. Haddii aad isticmaasho isla luuqad markasta, waxaad baran kartaa mid kasta oo ka mid ah xulashooyinka laga heli karo macOS. Laakiin haddii, liddi ku ah, aad isticmaasho dhowr luqadood, afkaaga hooyo, laakiin aad tahay luqad labaad si aad ula xiriirto goobta shaqada ama asxaabta, waxaan ku tusi doonaa hagaajinta ay tahay inaad fuliso
Aad bay muhiim u tahay inaad si wanaagsan u doorato luqadda Mac-gaaga, ugu yaraan luuqada Isbaanishka, maxaa yeelay qalad ku yimid doorashadiisa ayaa naga hor istaageysa inaan qabanno shaqooyinka caadiga ah sida qorista sumadda @, maadaama ay barokacday.
1 Sideen ku dooran karnaa luqadda macOS?
2 Sideen u bedelnaa luqadda Nidaamka Howlgalka?
3 Sideen ku badalaa luqada kumbuyuutarka Mac?
Sideen ku dooran karnaa luqadda macOS?
Waxa ugu horreeya ee aan ku khasbanaan karno waa Luqadda Nidaamka Hawlgalka hadhowna luuqada aan rabno inaan wax ku qorno Mac, oo loo yaqaan Isha gelinta. Luqadda nidaamka qalliinka iyo luqadda qorista looma baahna inay iswaafaqaan. Tusaale ahaan, waxaan u dooran karnaa Isbaanishka Nidaamka Howlgalka, oo waxaan u dooran karnaa Ingiriis ama Faransiis, tusaale ahaan, haddii aan ku qoreyno qoraal luqadahaas.
Sideen u bedelnaa luqadda Nidaamka Howlgalka?
On Mac, dhammaan nidaamyada nidaamka waxay ku jiraan PTixraacyada nidaamka. Xitaa haddii aad isticmaale cusub tahay, waad heli kartaa xulashooyinkan maadaama ay yihiin kuwo dareen badan leh. Si loo helo Xulashada Nidaamka:
Waxaa ugufiican ugu yeer laydh isboorti, adoo riixaya Cmd + boos.
Baarka taas oo muuqata, nooca Dookhyada Nidaamka.
Waxaa macquul ah, ka hor intaadan dhameystirin qorista qoraalka, arjiga aad ku aqoonsan doontid astaanta marsho.
Guji arjiga wayna furi doontaa.
Tallaabada xigta waxay noqon doontaa helitaanka astaanta Luqad iyo Gobol, lagu aqoonsaday nidaamka oo leh astaan ​​calan buluug ah. Haddii mar labaad, aad rabto inaad sidan oo kale sameyso adoo "ku xadgudbaya" wax soosaarka macOS, waxaad ku qori kartaa sanduuqa midig ee sare ee arjiga Idioma. Sawirka ayaa hadheeyay meelo yar oo ay ka jiraan hawl la xiriirta qoraalka la tilmaamayama, kiiskan luqad.
Kadib markaad gujiso Luqad iyo Gobol shaashadda ugu weyn ee Doorashada Luqadda. Dhinaca bidix, waxaan ku arki doonnaa luqadaha ugu caansan ee lagu xushay Mac-kan. Xaaladdan oo kale, waa caadi in la haysto luqadda hadda jirta oo keliya. Haddii sabab kasta ha noqotee aan dooneyno inaan u beddelno:
Waa inaan kaliya dhagsii calaamada "+" , kaas oo ku yaal salka hoose.
Markaas menu cusub ayaa furi doona, halkaas oo ah Luqadaha la heli karo.
Si taxaddar leh u fiiri, maxaa yeelay waxaan ka helnaa luqadaha dhammaan noocyadooda, tusaale Isbaanish waxaa jira in ka badan 10 nooc oo kala duwan.
Ka dib xulashadiisa, macOS ayaa na weydiineysa haddii aan rabno inaan bedelno luqadda weyn ee Mac midka la doortay ama ku sii wad isticmaalka midka hadda socda. Waxaan doorannaa midka la doonayo waana aqbalnaa.
Waa inaan maanka ku haynaa in eBeddelka luqadda ma saameynayo oo keliya qorista, laakiin sidoo kale wuxuu magacaabayaa dhammaan magaca luqaddaas marka la eego muujinta tirooyinka, taariikhaha, qaab dhismeedka kalandarka iyo habka loo muujiyo heerkulka. MacOS waxay ku dabaqeysaa magacyada caadiga ah ee luqaddaas. Tusaale ahaan, haddii aan dooranno Isbaanish (Isbaanish), waxay ururin doontaa:
Gobolka: Isbaanishka - waqtiga la doortay wuxuu noqon doonaa Spain isku xira.
Maalinta koowaad ee usbuuca: Isniinta - sida lagu muujiyey kalandarka deegaanka.
Taariikhda: Gregorian - waa kan ugu badan ee ku hadla luuqada Isbaanishka.
Si kastaba ha noqotee, waan hagaajin karnaa mid kasta oo ka mid ah xuduudaha kor lagu sharaxay iyadoo loo eegayo doorbidyadeena.
Sideen ku badalaa luqada kumbuyuutarka Mac?
Adigoon ka tagin daaqadii hore, waxaan ka helnaa badhanka hoose oo noo sheegaya Gudiga doorbida kiiboodhka ... Markaad gujiso, waan beddeli karnaa ilaha kumbuyuutarka laga soo galo, taas oo ah, luqadda aan wax ku qorno.
Dhanka kale, haddii aan joogno miiska oo aan rabno marin u hel Koodhka ilaha Soo galinta, waa inaan fureynaa doorbidyada, sida ku cad qeybta dejinta luqadda Nidaamka Howlgalka. Markaad ku jirto shaashadda nidaamka doorbididda weyn:
Tiirka bidix, waxaad ka heli doontaa mar kale luqadda / qoraalka aad wax ku qori karto.
Haddii aad rabto inaad mid ku darto, guji kaliya calaamadda "+" iyo liiska dhammaan teebabka la heli karo ayaa ka soo muuqan doona daaqad cusub
Qeybta hoose, a raadsadey. Waad isticmaali kartaa haddii aad u baahato.
Marka la helo, xulo oo waxay ka muuqan doontaa Waraaqaha Keyboard ee la heli karo
Ugu dambeyntiina, waxaad ka heli doontaa laba hawlood oo dheeraad ah xagga hoose.
Ku muuji kiiboodhka baarka menu: taasi waxay ina tusaysaa astaan ​​leh luuqada la xushay. Tani waxay si gaar ah waxtar u leedahay markaan si joogto ah u beddeleyno luqadaha. Dhinaca kale, waxay u oggolaaneysaa dhaqaajinta kumbuyuutarka shaashadda iyo emojis-ka Apple.
Si otomatig ah ugu wareeji isha laga helo dukumiintiga: macOS wuxuu awood u leeyahay inuu ogaado luqadda aan wax ku qorno oo uu si toos ah ugu beddelo.
Ugu dambeyntiina, haddii aan dib ugu laabanno bilowgii maqaalka, hadaanan dooran Isbaanish - ISO, hubaal ma calaamadeyn karno astaamaha sida: at, lahjadaha, xarfaha iyo wixii la mid ah.
Waxaan rajeynayaa in casharkaan uu ahaa mid aad jeceshahay oo aad uga tagto faallooyinkaaga qeybta hoose ee maqaalkan haddii aad rabto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Sida loo beddelo luqadda Mac-gaaga
Salaan Waxaan horey u badalay luuqada nidaamka qalliinka laakiin waxaan ubaahanahay inaan sidoo kale u badalo barnaamijyada, tusaale ahaan Firefox, word, ect
Ku jawaab alejandro jose
Waxaan u raacayaa talaabooyinka la tilmaamay si fiican, laakiin sidaas oo ay tahay, Ingiriisigu had iyo jeer waa afka kaliya wuxuuna ka hortagayaa (kiiskeyga Isbaanish) inuu ku sii ahaado luqadda la doorbido.
Ka tirtir faylasha la wadaago iCloud Drive
Ku fidi sawirada wakhti yar xeeladdan